Fandraisan'anjaran'i 41.74.213.54 - Wikipedia
De 41.74.213.54 dinika Laogim-panakanana laogy laogiim-panararaotana
5 Martsa 2019
10:355 Martsa 2019 à 10:35 Fampitahana tant. +58‎ Sekoly Ambony Loterana momba ny Teolojia ‎Aucun résumé des modifications Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday
10:205 Martsa 2019 à 10:20 Fampitahana tant. +11‎ Ireo taranja hita ao amin'ny Sekoly Ambony Loterana momba ny Teolojia ‎Aucun résumé des modifications Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday
10:185 Martsa 2019 à 10:18 Fampitahana tant. +55‎ Ireo taranja hita ao amin'ny Sekoly Ambony Loterana momba ny Teolojia ‎Aucun résumé des modifications Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday
10:115 Martsa 2019 à 10:11 Fampitahana tant. +77‎ Teôlôjia dôgmatika ‎Aucun résumé des modifications Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday
10:015 Martsa 2019 à 10:01 Fampitahana tant. +35‎ Antrôpôlôjia kristiana ‎Aucun résumé des modifications Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday
09:565 Martsa 2019 à 09:56 Fampitahana tant. +26‎ Fanahy Masina ‎Aucun résumé des modifications Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday
09:095 Martsa 2019 à 09:09 Fampitahana tant. +43‎ Sambofiaran' i Nôa ‎Aucun résumé des modifications Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday
08:575 Martsa 2019 à 08:57 Fampitahana tant. +6‎ Safodrano ‎Aucun résumé des modifications Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday
08:545 Martsa 2019 à 08:54 Fampitahana tant. +11‎ Hama ‎Aucun résumé des modifications ankehitriny Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday
08:525 Martsa 2019 à 08:52 Fampitahana tant. +17‎ Kanaana (zanak'i Hama) ‎Aucun résumé des modifications ankehitriny Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday
08:465 Martsa 2019 à 08:46 Fampitahana tant. +1‎ Kanaana (zanak'i Noa) ‎Aucun résumé des modifications ankehitriny Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday
08:425 Martsa 2019 à 08:42 Fampitahana tant. −1‎ Kanaana ‎Aucun résumé des modifications Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday
08:405 Martsa 2019 à 08:40 Fampitahana tant. +4‎ Fiteny amôrita ‎Aucun résumé des modifications Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday
08:385 Martsa 2019 à 08:38 Fampitahana tant. +4‎ Fiteny someriana ‎Aucun résumé des modifications Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday
08:325 Martsa 2019 à 08:32 Fampitahana tant. −1‎ Mesôpôtamia ‎Aucun résumé des modifications Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday
08:255 Martsa 2019 à 08:25 Fampitahana tant. 0‎ Mesôpôtamia ‎Aucun résumé des modifications Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday
08:225 Martsa 2019 à 08:22 Fampitahana tant. −13‎ Asiria ‎Aucun résumé des modifications Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday
08:195 Martsa 2019 à 08:19 Fampitahana tant. +24‎ Jônà (mpaminany) ‎ Nanao fanitsiana Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso Fanovana avy amin'ny finday Fiovana tamin'ny alalan'ny tranonkala finday
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:Fandraisan%27anjara/41.74.213.54"